Ikpeazụ April, M mere a post banyere Google My Business. Izu ụka a, achọrọ m nwa m nwanyị n 'ntutu ntutu ya. Salonlọ Mmanya ahụ mara mma ma ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ dị egwu. Onye nwe ụlọ ahụ jụrụ m ihe m mere maka ndụ ma gwa ya na m nyeere ụlọ ọrụ aka n'ịzụ ahịa n'ịntanetị.
Anyị na-eguzo na kọmputa ma ọ kọọrọ m na isi okwu ya nke ndị na-ere ahịa mekwara weebụsaịtị ya. Agwara m ya ka ọ chọọ na Google maka “Onye na-akpụ ntutu, Greenwood, IN“. Up popped a mara mma map ya niile nke mpi… ma ọ dịghị ntinye maka ya salonlọ Mmanya. M gafere ya na-ekwuputa ahia ya na Google My Business o we were ihe dika nkeji iri.
Ọ bụrụ n'ị na-azụ ahịa weebụsaịtị maka azụmaahịa mpaghara ma ọ bụ na - eme njikarịcha njin mpaghara, kedu ka ị ga - esi hapụ usoro a? Ọ bụ n'efu, ọ dị n'elu peeji nsonaazụ ọchụchọ ahụ, ọ dịkwa mfe iji! Google agbakwunyela mmelite ọnọdụ mpaghara na ibe ahụ.
Ọbụna ma ọ bụrụ na ị bụghị azụmahịa mpaghara, m ka ga-adụ gị ọdụ ka ị jiri Google My Business. Ndị ọchụnta ego na-achọ iji ihe ndị dị na mpaghara ahụ eme ihe n'ihi na ọ dịịrị ha mfe ịgwa ha okwu, gaa leta, ma nweta nkwado. Zụọ ahịa mpaghara, zụta mpaghara, chọọ mpaghara… ma depụta azụmahịa gị ka a chọta gị. Bing nwekwara Ebe Ndepụta Mpaghara
Tags: map binggoogle mpaghara azụmahịagoogle azụmahịa mnchọta mpagharanjikarịcha nchọta mpagharaobodo seo
Echere m na ka ị na-enyekwu ihe ọmụma gị ma wuo ọnụnọ maka azụmahịa gị, ọ ga-eme ka ị na-enwekwu eyeball na ike gị ga-adịkwu. Omuma ahia nke obodo Google di na ndepụta m!
Imirikiti ndị nwe ụlọ ọrụ na-ejikọtakarị ịkpọsa ụlọ ọrụ ha na saịtị netwọkụ ma ọ bụ ịntanetị nke na ha na-elegharakarị nhọrọ ndị a anya. Nke a bụ eziokwu kachasị maka nne ochie na ụlọ ọrụ azụmaahịa, bụ ndị tụkwasịrị obi mgbe niile n'okwu ọnụ nke ụlọ ọrụ ha.
Mee 13, 2011 na 11: 35 AM
Anyị anọwo na-etinye oge dị ukwuu na-ebuli azụmaahịa ndị ahịa mpaghara n'ime Google Local Business yana Maapụ na iji Maps Booster. Dịka ọmụmaatụ otu ụlọ ọrụ na-echekwa ọdụ ụgbọ elu saịtị anyị na-enweta ọkara nke okporo ụzọ ha site na ndepụta Maps naanị. Inwe azụmahịa nke obodo gị na ibe otu dị oke mkpa ma anyị na-ahụ ohere maka ndị ahịa anyị ka anyị na-enweta ha na ibe otu ọtụtụ oge maka "mkpụrụ ego ego" ha. Achọrọ m ịnweta ndị ahịa na Maapụ, PPC na Natural. Ime nke a, enwere m ike ikpuchi 10-15% nke ibe niile. Mgbe ndị ahịa nwere ike ịchọ nyocha ma hụ ihe karịrị otu ndepụta dị n'elu na ma ọ bụ n'okpuru anọghị n'ogige atụrụ anyị na-ahụ ọtụtụ azụmaahịa ọhụụ, ọ bụghị ịkpọ ndị ahịa ọhụrụ.